Ukucheba okuhle kweNwele zasePersi zeKati - Imveliso Yekati
Ukwaphula Up Tips
Ukucheba okuhle kweNwele zasePersi zeKati
Akusoloko kulula ukufumana i-cat clippers efanelekileyo yeekati ezineenwele ezinde ezinje ngamaPersi. Izinwele zekati zasePersi zinde kwaye zilungile, zisenza ukuba sithambekele kwimethi kunye nomonakalo, kodwa ukukhetha isinqumleli esifanelekileyo kuya kukunceda ugcine loo dyasi intle iphantsi kolawulo.
Ezona ziKliphu ziLungileyo zeNwele zePersi zeKati
Izinto ofuna ukuzithathela ingqalelo xa uthenga into yokucheba iinwele zekati zibandakanya isantya seemoto zeyunithi kunye nohlobo lweebhleyidi oza kuzifuna kubude apho ufuna ukucutha uboya bekati yakho.
Eyona shaver yekati ibalaseleyo inesakhiwo esomeleleyo esiya kuma ukuze sinxibe kwaye sikrazule.
Iikati nazo zihlala zikhetha iiyunithi ze-clipper ezihamba ngokuzolileyo ngokunokwenzeka. Iikati ezininzi zinobuzaza kakhulu kwisandi sokucheba, kwaye ezinye iikati ziya kucaca ngokupheleleyo kukungxola okukhulu kunye nentshukumo enamandla yesixhobo sokuzilungisa.
Iinyani ezimangalisayo zekati yasePersi
Imifanekiso yekati yasePersi engenakunqandwa
Imifanekiso yekati yeHimalayan kunye neMbali yokuzalela
Ukuhlaziywa kweKati yokuCoca iziChobo
Zininzi iziqwengana ezibalaseleyo kwimarike yendlu yegusha yasePersi:
I-Oster Golden A5 IziQhoboshi zokuCoca izilwanyana eziPhezulu ziPhezulu kuluhlu oluqwalaselwe kakuhle lokucheba iinwele. I-A5 iphakathi kweemodeli ezizolileyo, kwaye isebenzisa inani 10 blade ukunciphisa iinwele ngokufutshane kwaye kusika ngoboya obudibeneyo ngokulula. Unokukhetha phakathi kwemodeli enye yesantya kunye nesantya esineemodeli ezimbini. Nangona kunjalo, olu khetho alukho lincinci kuba isantya esiphindwe kabini i-Oster yeyona nto ilungileyo yokukhetha izilwanyana ezinobuzaza. Isantya esiphezulu siphezulu kakhulu kunesantya esiphantsi, yiyo loo nto imodeli yeesantya ezimbini inokuba luncedo kakhulu.
I-Oster yegolide i-A5 iziQinisekiso zokuCoca izilwanyana
I-Wahl Pet-Pro Clippers ibizwa njengoKhetho loMhleli kwikati indawo yezixhobo zeNdalo . Yindlela efikeleleke kakhulu ekuthengiseni iidola ezingama-30. Kuza neseti yamacangci amane kunye neekomi, isikere kunye nezinto zokucoca zeebhleyidi zakho. Iibhlethi 'azikho simahla' kwaye ziyazilola kwaye i-clipper inemoto esindayo yokujongana nomsebenzi wakho omkhulu wokuzilungisa. Ayisiyontambo engenza ukuba kube nzima ukuyilawula kodwa ixabiso liyenza ngokuqinisekileyo ukuba iqwalaselwe ngaphezulu kwemodeli engenantambo kwaye i-Wahl inedumela lokubonelela okuphezulu komgangatho kubanini nakubachwephesha.
Ukukhetha ii-Pet-Pro Clippers
I-Sminiker yoBuchule beNgcali ephantsi eVuselelekayo engenacingo yeCat kunye ne-Dog Clippers ibonakalisiwe lulwazi lwekati Indawo yeOliveKnows . Lixabiso elifikeleleke kakhulu kwimodeli engenantambo kwaye libaleka malunga ne- $ 25. Iza kunye neebhleyidi ezi-4, ikama, isikere, i-nail trimmer, ifayile kunye nezinto zokucoca. Abasebenzisi kwiAmazon bayinika i-4.1 ngaphandle kweenkwenkwezi ezi-5. Umzekelo omkhulu wabantu abatsha kraca ekuzilungiseni kwaye iikhombisi zesikhokelo ziya kukunceda uyinqumle ikati yakho ngokuchanekileyo nangokukhuselekileyo. Incinci kwaye ilula kwaye yenza ukuba kube lula ukujikeleza ikati kwaye amandla ayo alungile kwimisebenzi 'yesiqhelo' nangona ungafuna ukuhamba nemodeli eyomeleleyo yekati enoboya obudibeneyo.
I-Sminiker yoBuchule beNgcali ephantsi eVuselelekayo engenakucinywa ikati kunye neeClippers zeNja
Eyona Clippers igqwesileyo yoboya obudityanisiweyo
Ukuba uzifumana ukwimeko engathandekiyo yokujongana noboya obudibeneyo basePersi, kukho ezinye iindlela ezilungileyo zokukhetha iziqhoboshi onokuthi uziqwalasele.
I-Wahl Professional Animal Bravura Lithium Clipper ifumana i-4.2 ngaphandle kweenkwenkwezi ezi-5 kubasebenzisi beAmazon. Ixabiso ngama- $ 160. Iza ngemibala emininzi ekhangayo (i-turquoise, i-gunmetal, i-berry, i-burgundy, i-pinki kunye nemfusa). Iyunithi engenantambo yenza ukuba kube lula ukusebenza nayo xa usombulula imiba enzima yokuzilungisa kwaye i-'5 kwi-1 'blade inokuhlengahlengiswa ukusuka kubude obungu- # 9 ukuya ku- # 40. Kukwathule kakhulu kwaye kunesandi esincinci esenza ukuba kube lula kwikati esele ingonwabanga.
I-Wahl yoBuchule beZilwanyana zeBravura Lithium Clipper
I-Andis UltraEdge Super 2-Speed ​​Detachable Blade Clipper ibiza malunga ne- $ 160. Ababuyekezi beAmazon bayinika i-4.3 ngaphandle kweenkwenkwezi ze-5 kwaye bacaphule ukusebenza kwayo cwaka kunye nokucotha ubushushu kwiibhloko kwindawo ekhawulezayo. I-clipper inemoto enamandla ejikelezayo eyenza ukuba ibe lukhetho olukhulu lokuzilungisa izilwanyana ezininzi. Kuza ne-UltraEdge blade eyaziwa ngokuba sisiphelo esiphakamileyo, iincakuba ezisemgangathweni ezithatha ixesha elide ukunxiba. Ikwayilelwe ngendlela yokuphelisa ukuvaleka ngoboya bekati obunokuba luncedo kakhulu xa ujongana nomntu wasePersi oneenwele ezinde kunye neemat.
I-Andis UltraEdge Super 2-Speed ​​Speed ​​Detachable Blade Clipper
Enye imodeli yeAndis yiProClip Speed ​​Detachable Blade Clipper. Le ivenkile malunga ne- $ 110 kwaye ifumana i-4.2 ngaphandle kweenkwenkwezi ezi-5 kubasebenzisi beAmazon. Imodeli enentambo, isibonelelo sokusebenzisa esi siqhotyoshelweyo kwiikati ezihambelanayo yimoto enamandla. Le clipper yenzelwe ukukhathalela imisebenzi enzima ngokukhawuleza nangokucocekileyo ebalulekileyo xa unekati exineneyo esele ixinekile kwaye ingonwabanga. Njenge-Andis UltraEdge, ikwayilelwe ukuphelisa ukubakho koboya obuvalelekayo kwi-clipper eyenza ukuba umsebenzi uhambe ngokukhawuleza kwikati kwaye wenze ukucoca kamva kube lula kuwe.
Isantya seProClip esinqumlayo seBlade Clipper
Xa isizaukulungiselela i-trimKukho izinto ezimbalwa onokuzenza ukwenza inkqubo ibe lula:
Kubalulekile ukuba uhlambe kakuhle ngengubo yakho yasePersi ngaphambi kokusebenzisa i-trimmer. Oku kunceda ekususeni imethi kwaye kuthintele ukubethelelwa ngumoya osikiweyo.
Nje ukuba iinwele zichetyiwe, kunjaloixesha lokuhlamba.Hlamba ikati yakhongokulungileyoishampu yokujonga imekokwaye ulandele ngomnye umsebenzi oqinileyo wokubrasha yakuba ikati yakho yomile.
Nika ikati yakho ibrashi ngokucokisekileyo yonke imihla embalwa kwaye oku kuya kwenza ukuba i-trim elandelayo yasePersi ibe lula.
Malunga neenwele zekati zasePersi
Uhlobo lwasePersi lubonisa ingubo eshinyeneyo, eneenwele ezinde eyothusayo xa uzilungisile. Ngelishwa, xa ingalungiswanga, le dyasi izukileyo inokuba sisiphithiphithi esimanyumnyezi. Ukuzilungisa okungaguquguqukiyo kuyimfuneko ukuthintela iimeko zeenwele ekubeni ziphume esandleni ngokwenene.
I-Persian Show Ubunzima bokuzilungisa
Abanikazi bekati basePersi abafunabonisa ikati yaboUya kufuna ukuqaphela umbono wokuzilungisa ekhaya ngononophelo olukhulu. Kwawona mngxunya weenwele zekati zasePersi uya kuvelisa iziphumo ezingathandekiyo ukuba awunakukwazi malunga nokucheba ikati elineenwele ezinde. Ukuba ubonakalisa isilwanyana sakho kwifayile ye-bonisa isekethe, kuya kufuneka ucinge ngamandla ngokushiya ifayile ye-ukuzilolonga kwiingcali. Imigangatho yokuzala yasePersi zibaluleke kakhulu kwaye unokufuna ukutsiba ukunciphisa ngokupheleleyo xa kuziwa ekugcineni ukubonakala komgangatho wokubonisa.
Zenzele isigqibo sokuba yeyiphi i-Trimmer efanelekileyo
Ngelixa zininzi izinto zokucheba iinwele kwikati kwintengiso esemgangathweni obalaseleyo, ayizukusebenza kakuhle kubude obude, obungqingqwa basePersi. Ingumbono olungileyo ukujonga uphononongo lweentlobo ezahlukeneyo zokucoca kwaye ubuze abanye abanikazi bekati basePersi kwindawo yakho ngezimvo zabo ngaphambi kokuba batyale imali eninzi kwisilandi esitsha.
Malunga Iindawo Zokuhlala Ne Memorials I-Nail Care Nokuyilwa Kweempawu Uxinzelelo Slideshows Used Cars Mens Historical Clothing
amagama unyaka omnye wokufa
kuthetha ntoni xa ubona umnyama esibhakabhakeni
Iikati zasekhaya ezibonakala ngathi ziingwe
ukhusela njani iintyatyambo emangcwabeni ivazi
Iindawo zokuzonwabisa ze-spa kwimithombo yesundu ca
Indawo Yokufikela Imitshato